China Hotsale Adjustable Tennis Badminton Stringing MACHINE Manufacturers, Suppliers, Factory - Buy & Wholesale Hotsale Adjustable Tennis Badminton Stringing MACHINE - DKsportbot
Hotsale Adjustable Tennis Badminton Stringing MACHINE
Mamatotra milina fanakanana mainty DS8 1. Birao lehibe informatika: Birao fanaraha-maso Microcomputer, fampisehoana LED. 2. Ny fizahana-tena sy ny fanaraha-maso feno. 3. Misintona tsy tapaka, arovy ny kofehy tsy handratra rehefa anaty fihenjanana. 4. Fahatsiarovana fitehirizana, setra efatra ho...
Mamatotra milina fanakanana mainty DS8
1. Birao lehibe informatika: Birao fanaraha-maso Microcomputer, fampisehoana LED.
2. Ny fizahana-tena sy ny fanaraha-maso feno.
3. Misintona tsy tapaka, arovy ny kofehy tsy handratra rehefa anaty fihenjanana.
4. Fahatsiarovana fitehirizana, setra efatra ho an'ny ankapobeny amin'ny fivarotana, fandidiana mora kokoa.
5. Pounds tsara, marina ny +/- 0.1 pounds.
6. Vondron'olona efatra ny Pre stretch
7. Ny kapoaka Photoelectric, ny fanaraha-maso ny fanamafisam-peo mandeha ho azy dia mampiroborobo ny hafainganam-pandeha ary mampihena ny tsy fahombiazan'ny fahombiazana.
Clip rakitra ao anatin'ny enina samy hafa ao anatin'ny fotoana mitovy, fanaraha-maso mandeha ho azy miaraka amin'ny mpametaka clamp mandroso, manangona fotoana fitahirizana fotoana.
Fotsifotsy sy hohosotra, hapetahana amin'ny kofehy mamatotra, tsy mitsofoka ary tsy mandratra amin'ny famatorana fehikibo.
Misy koa tsy miankina aorian'ny departemanta varotra. Ny kalitao sy serivisy dia zava-dehibe indrindra amin'ny orinasanay. Manana fiantohana roa taona izahay, handefa fitaovana ho anao maimaim-poana amin'ny herintaona, handefasana entana amin'ny taona faharoa. Azafady mba tehirizo tsara ny barcode ao amin'ilay milina, azontsika atao ny mitsara ireo taona nampiasanao tamin'ny alàlan'ny barcode. Ny milina tsirairay dia manana kaody miavaka.
Rehefa manova ny badminton racket ho any amin'ny rakitra tenisy ianao dia avereno azafady ny familiana ary esory ny mpiaro ny badminton racket avo. Ary amboary ny sandrin-tsofin'ilay mamatotra kofehy mba hifanaraka am-paosy tennis.
Hot Tags: hotsale adjustable tennis badminton stringing machine, China, manufacturers, suppliers, factory, buy, wholesale, in stock
Previous: DS8 Electronic Stringing Machine Made In China
Next: DS8 Economic Factory Stringing Machine For Racket
Electronic Badminton Racket Stringing Machine Price
Not Pro's Pro Shuttle Express Badminton Stringing Ma...
Computer Automatic Head Badminton Racket Stringing M...